Ngokwahlulwahlulwa- i-NJ kunye ne-NY yeNdawo yokuThengisa, ukuKhuselwa, ukuKhuselwa kweNdawo kunye nabaGcini beMithetho yokuThengisa
ikhaya / Blog / Akohlulwanga
KUTHENI BONKE BABONELELA XA KUFIKELELA UCWANGCISO?
Disemba 31, 2018 AkohlulwangaUshiye uluvoUDerek Soltis
Ukucwangciswa kwepropathi akuyona into abantu abaninzi abafuna ukucinga ngayo, kwaye kaninzi ayikhathalelwa. Kodwa kutheni le nto abantu bengahoyi okanye ubuncinci belibaziseka xa kuziwa kucwangciso lwefa?
Nazi ezinye zezizathu eziqhelekileyo:
Ngaba ukubhujiswa kuya kumisa ukuthengiswa kweSheriff entsha yaseJersey?
Novemba 14, 2018 AkohlulwangaUshiye uluvoUDerek Soltis
Ewe, ukubhengezwa njengongenamali kuya kumisa ukuthengiswa kweNew York Sheriff kwiimeko ezininzi.
Ayinamsebenzi ukuba ifayile yokubhangiswa ye-7 ifayilishwe okanye icandelo 13 lokuchacha ligcwalisiwe. Yintoni ebalulekileyo kukuba ukuhlala kokuzenzekelayo kusebenza ...
Kwenzeka ntoni kuMama waM i-NJ kaRandi yokuBoleka emva kokusweleka kwakhe?
Oktobha 1, 2018 AkohlulwangaUshiye uluvoLazaro Cardenas
Iimpendulo kwimibuzo malunga nokuBuyisa uRhafu emva koKusweleka kwabazali eNew Jersey
Eli nqaku lenziwe yiGqwetha leNgcingane laseNew Jersey.
Yintoni iRevenue Revenue e-New Jersey?
Imbuyiselo ebolekayo ...
Izinto ezimbi zehlela abantu abalungileyo
Julayi 13, 2018 AkohlulwangaUshiye uluvoUDerek Soltis
Ngaba usapho lwakho kunye neShishini lakho lilungile ukuba uyadlula?
Khawufane ucinge ngokuqhuba inkampani enkulu, ukuba sempilweni entle, ukuwa ngelixa ukwiholide, kwaye emva koko kufa. Inokuba nzima kangakanani le ntsapho yakho? Ngaba ishishini lakho liza kuphila? Oku ...
I-Bitcoin ngoku yamkelwe njengeNtlawulo yeGqwetha le-NJ
Novemba 28, 2017 AkohlulwangaUshiye uluvoUDerek Soltis
I-Bitcoin, iBlockchain, kunye nokuhlawula igqwetha lakho
"... I-Bitcoin isinika, okokuqala, indlela yomsebenzisi omnye we-Intanethi yokudlulisela isixhobo sepropathi yedijithali komnye umsebenzisi we-Intanethi, ukuba ugqithiselo luqinisekisiwe ukuba ...
Novemba 26, 2017 AkohlulwangaUshiye uluvoNguJohn Anderson
Kwihlabathi lanamhlanje, iimeko zatshintsha emsebenzini kunye nexesha elinye lokufumana inzuzo kushishino kukugcina abasebenzi bonwabile. Ngenxa yoku, ukugxila komqeshi kujongela phambili kwiimfuno zabasebenzi, ukubonelela ...
IGqwetha laseNew Jersey lokuBhengeza ukuPhononongwa kwangaphambili kwi-Revenue yakho kunye neNqaku
Juni 29, 2017 AkohlulwangaUshiye uluvoUDerek Soltis
Udinga igqwetha lezokuTyhilwa leNtsholongwane eNtsha laseJamani ukuba likuPhonononge kwangaphambili uBambiso lwakho ngokuBoleka kunye neNqaku lokukhusela isenzo sakho sangaphambi kwexesha.
Njengamagqwetha, senza olu phando lwayo yonke indlu, inqaku, kunye ...
Matshi 29, 2017 AkohlulwangaUshiye uluvoAndres Cardenas
Indawo ethengisa izindlu zaseNew Jersey kusetyenziswa igqwetha lendawo yokuthengisa izindlu kwiJersey
Iqela lethu lizinikele ekwenzeni konke ukuthengiselana ngepropathi yakho njengoko kungenamthungo kwaye kungabikho kuxinzelelo njengoko kunokwenzeka, Ukuthenga ikhaya ku ...
IJersey City Foreclosure yomthetho ihlala iye eofisini ngaphesheya kwe-Hudson County Courthouse
Icandelo lokuhlala eMyanmar
Matshi 24, 2017 AkohlulwangaUshiye uluvoUDerek Soltis
Umthetho waseRoma waphenjelelwa kakhulu yintanda-bulumko yamaGrike, kodwa imigaqo yayo eneenkcukacha yaqulunqwa ngoochwephesha bengcali kwaye babedume kakhulu. Kwiinkulungwane ezidlulileyo phakathi kokunyuka kunye nokuhla koBukhosi baseRoma, umthetho wahlengahlengiswa ukuze uhambisane ...
Ityala lokufuna umthetho liqinisiwe
Umthetho yinkqubo yemithetho eyenziweyo kunye nokunyanzeliswa ngamaziko entlalontle okanye urhulumente ukulawula indlela yokuziphatha. Umthetho njengenkqubo unceda ukumisela nokuqinisekisa ukuba uluntu lubonisa intlonipho, kunye nokulingana phakathi kwabo. Imithetho enyanzeliswa ngurhulumente ...
Izikolo zomthetho ze-12
Matshi 23, 2017 AkohlulwangaUshiye uluvoUDerek Soltis
Isikolo sezomthetho (esaziwa njengeziko lezomthetho okanye iikholeji yomthetho) liziko elisebenza ngemfundo yezomthetho, ngokufuthi elibandakanyeka njengenxalenye yenkqubo yokuba ngummeli ngaphakathi kolawulo olunikiweyo.
E-Brazil imfundo yezomthetho iqala ...
Umthetho uthatha iholide
Kwimovie yothando ye1934 "Ukufa kuthatha iHolide," Ukufa kuthatha ifom yabantu ngeentsuku ezintathu, kwaye umhlaba uguquka ube sisiphithiphithi.
Kwenzeka into efanayo xa umthetho uhamba ngeholide. Imithetho ayinakunyanzeliswa okanye ipolitiki. Abemi baphelelwa lukholo ...
Ifemu yomthetho esebenza kumazwe amaninzi ihlala inezakhiwo ezintsonkothileyo ezibandakanya ubuhlakani obuninzi, ngakumbi kwimimandla efana neHong Kong neJapan ethintela ubuhlakani phakathi kwabameli basekhaya nabangaphandle. Isakhiwo esinye ...
Nxibelelana neNew York okanye iJaji laseNew York lokuTyhilwa kweZokhuseleko namhlanje.
Matshi 22, 2017 AkohlulwangaUshiye uluvoUDerek Soltis
IiOfisi zoMthetho zikaPatel, uSoltis kunye noCardenas bamelwe ukuba babenetalente esemthethweni eNew York naseNew Jersey, kugxilwe kumacala angaphambili, ukulungiswa kwemalimboleko, ukubhengezwa, ukuthengiswa kwezinto, kunye nokuthengiswa kwezindlu eNew Jersey. Ukuba ucinga u ...
Umthetho uvumela abancinci njenge-13 ukutshata
January 24, 2017 AkohlulwangaUshiye uluvoUDerek Soltis
Umtshato womntwana uchazwa yimibutho yehlabathi jikelele njengomtshato osemthethweni okanye umanyano olungekho sesikweni olungeniswe ngumntu ngaphambi kokuba ifike kwiminyaka ye-18.Ixesha elimiselwe ngokusemthethweni lokutshata kwezinye iindawo lingaphantsi kweminyaka ye-18, ngakumbi ...
Ingcali yepolitiki yacebisa umthetho wokuba izinja zibambe umthetho
Ibhanti lesitulo, ekwabizwa ngokuba yibhanti yokhuselo, sisixhobo esikhusela imoto esenzelwe ukhuseleko lokuhlala kwisitulo esingenzakalisiyo esinokubangelwa kukungqubana okanye ukumiswa ngesiquphe. Ibhanti yendawo yokuhlala isebenza ukunciphisa amathuba ...
Umthetho ophakanyisiweyo ungabeka uphando lomhlaza emngciphekweni
Uphando lomhlaza sisiseko esisisiseko somhlaza ukubona oonobangela kunye nokuphuhlisa izicwangciso zokuthintela, isifo, unyango kunye nonyango.
Uphando lomhlaza luqala kwi-epidemiology, bioscience yemolekyuli ekusebenzeni kwezilingo ...
Umthetho wokuNcitshiswa kweKhaya wokungabi namakhaya ukuze ube ngumthetho
Ukungabi namakhaya yimeko yabantu ngaphandle kwendlu esisigxina, njengendlu okanye indlu. Abantu abangenamakhaya bahlala kakhulu abakwazi ukufumana nokugcina izindlu rhoqo, zikhuselekile, zikhuselekile kwaye zinezindlu ezifanelekileyo. Inkcazo esemthethweni yabangenamakhaya ...
Inkundla igwebe ngomthetho wemipu
Ilungelo lokugcina kwaye ubambe iingalo uqinisekisiwe sisilungiso sesiBini kuMgaqo-siseko wase-United States. Imimandla yaseMelika iphinde ibe nakho ukubanamalungelo okugcina kunye nokuphatha iingalo, inika ingqina kucacile ukuba lilungelo ...